Afgaanistaan: Dowladda oo sii daynaysa 400 oo maxbuus oo katrisan Taalibaan - Tilmaan Media
Dowladda Afgaanistaan ayaa ogolaatay inay siidayso 400 oo maxbuus oo katirsan ururka Taalibaan. Maxaabistaan ayaa waxaa lagu tilmaamay kuwa aad khattar u ah oo dambiyo waawayn gaystay. Arrintaan ayaa wadada u xaaraysa bilaabashada wadahadalo ay yeelashaan dowladda Afgaanistaan iyo ururka Taalibaan.
Taalibaan ayaa si ay wadahadal ula furto dowladda waxay sharti uga dhigtay in lasii daayo maxaabiistaan oo kamid ah 5,000 oo maxaabiis taaalibaan ah oo lagu heshiiyay in lasii daayo. Golaha Sharci dajinta ee dalkaas (Loya Jirga) ayaa ansixiyay sii daynta 4,00 ee maxaabiista ah si wadahadlku u bilawdo.
Madaxwaynaha Afgaanistaan Ashraf Ghani, ayaa kahor intaan maxaabiista lasii dayn wuxuu isugu yeeray in kabadan 3,000 oo ah hogaanka siyaasadda iyo bulshada ee dalkaas si uu u dhagaysto aragtidooda ku aadan sii daynta maxaabiistaan.
Haddii maxaabiistaan lasii daayo waxay kadhigantahay in dowladda Afgaanistaan ay fulisay heshiiskii ahaa sii daynta 5,000 oo ah maxaabiis katirsan Taalibaan.
Kooxaha udooda xuquuqda aadanaha ayaa dood kakeenay sii daynta maxaabiistaan oo qaar kamid ah qayb ka ahaayeen weeraro lagu laayay dad isugu jira rayid iyo millatari ba.
Waxaa la qorshaynayaa in wadahadallada udhaxeeya labada dhinac ay todobaadkaan ka bilawdaan magaalada Doha ee caasimadda dalka Qadar. waxaana lafilayaa in hormar laga gaaro wadahadalladaas kahor doorashada Maraykanka ee dhacaysa bisha Nofebar ee nagu soo aadan.
Dhismaha waddada Muqdisho-Afgooye oo dib loo billaabay